Previous Article Ndekwuru Nde Mmadụ Na-Arịa Ịba Ọcha n'Anya Na Nigeria – Dọkịta Ọkpala
Next Article Mmadụ Puku Ise Erita Erere Ile Ahụ N'efu
Ya bụ atụmatụ nkuzi, nke a nọkwàrà n'ime ya wee nye ọgwụgwọ ọrịa n'efù nyègara ndị obodo ahụ, bụ nke a hàzìrì site na njikọ aka ụlọ ọrụ òtù mba ụwa na-ahụ maka ahụike, bụ ụlọ ọrụ 'World Health Organization' nà isi ngalaba ụlọ ọrụ na-ahụ maka ahụike na ya bụ steeti.
N'okwu ya na mmèmmé ahụ, kọmishọna na-ahụ màkà ahụike na steeti ahụ, bụ Dọkịta Vincent Ọkpala mèrè ka a mara na ọ bụ ndị bi na mpaghara ebe ahụ ìjú mmiri na-eme mkpamkpa ka e hìbèèrè atụmatụ ahụ, dịka a hụtara ya dịka ihe dị oke mkpà na ihe ga-abàra ha uru nke ukwúù.
O kelèrè aka na-achị steeti ahụ, bụ gọvanọ Willie Obianọ maka ezi ịgba mbọ nke ọchịchị ya n'oge ahụ ya bụ oke iju mmiri wakpòrò ndị mpaghara ahụ n'ahọ gara aga, bụkwa nke o siri na ya wee dọta enyemaka òtù mba ụwa dị iche-iche, bụ ndị gbatakwara ọsọ enyemaka nke ha n'ọtụtụ ụzọ.
Na ntụnye nke ya, onyeisi nhàzi ụlọ ọrụ 'World Health Organization' na steeti ahụ, bụ maazị Dọkịta Chukwumụanya Igboekwu kwùrù na gọọmenti steeti ahụ kpọtụụrụ ha, wee kọwatara ha bànyere nkwadóbé maka iju mmiri nke ahọ a, nke mezịrị ka ha na onwe ha kpọtụrụ ma nweta nkwàdo site n'aka isi ngalaba na-ahụ maka ọnọdụ gbanụgbanụ n'ụlọ ọrụ òtu mba ụwa bụ 'United Nations'. O mekwàzịrị ka a mara na ha emepùtela ọtụtụ ihe dị iche-iche n'ime-ime obodo, ọ kachasị dịka o sìrì metụta ịdọ ndị mmadụ aka na ntị, inye nkuzi na ime nkwadobe maka ya bụ iju mmiri nke e kwùrù na ọ ga-agba nnukwu n'ahọ a.
Ndị dọkịta na ndị ọzọ ma nke ekwe na-akụ n'ọrụ ahụike nọrọ na mmemme ahụ wee nyòchaa ọtụtụ ndị mmadụ sonyere na ya ahụ ma nyekwa ha ọgwụgwọ n'efù, nke gụnyere ndịikom ma ndinyòm, tinyere ụmụntakịrị nọ n'agbàtà ọnwa efu na ọnwa isii, ọ kachasị dịka o sìrì metụta ọrịa ịbà, ọrịa ọnyụnyụ na ọgbụgbọ, ya na ụfọdụ ọrịa ndị ọzọ na-efe èfè.
Onyeisi ọchịchị obodo Ọdekpe, bụ maazị Vincent Okei fọrọ ekele n'ụkpa wee bunye ọchịchị steeti Anambra maka ezi ọrụ, ọbụnadị dịka ọ gbàrà akaebe na obodo ahụ na-abụkarị ndị mbụ na-ebu ụzọ erita úrù oge ọbụla a chịkọbara ihe metụtara nsogbu ahụike na steeti ahụ.
O kwùrù hoohaa na ìjú mmiri na-ebì obodo ahụ aka ọjọọ, nke na ụdị mkpamkpa ya bụ ajọ ọnọdụ kpàrà n'ebe ahụ n'ahọ gara aga kwèsìrì ka e lebàra ma kpachàpụkwara ya anya nke ukwuu. Ọ kpọkùzịrị ụmụafọ obodo ahụ ka ha tinye n'ọrụ ma mezùpùta ihe niile dị iche-iche ha mụtàrà na nkuzi ahụ e nyèrè.